Dowladda Soomaaliya oo diyaarisay barnamij lagula soconayo lacagaha ay hay’adaha soo geliyaan dalka – Bandhiga
Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheysaanta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray go’aan lagu dhaqan gelinayo heshiis ay horay u gaareen hay’adaha Soomaaliya ka howlgala.
Heshiiska ayaa ah inay isticmaalaan Bankiga dalka lana rabo hada in lagula xisaabtamo dhaqan galinta hishiiskaasi, wasiir Jamaal ayaa sidoo kalena lagu adkeeyo sida Soomaalida loogu xoojiyo inay isticmaalaan bankigayada dalka.
“Waa in lala xisaabtamaa Hay’addaha ka shaqeeya dalka halka ay mariyaan lacaga dalka ay soo galiyeen horeyna waan kala hishiinay sidaa dareedeed waa inaan xoojinaa dhaqan galinta heshiisyada” ayuu yiri Wasiir Jamaal.
Wasiir Jamaal waxa uu sheegay in kaliya lacagaha dalka soo gali aysan laheyd Soomaaliyeed hase ahaatee ay jiraan hay’addo mashaariic ka fuliya dalka sida lagu ogaaday lacag ka badan labo bilyan oo doolarka Mareykanka ayaa soo gasha dalka sanadka kasta waana in la ogaado halka la mariyo iyo sida loo maareeyo.
Wasaaradda qorsheynta ayaa sheegay iney diyaarisay barnaamij lagula soconayo lacagaha doolarka ee soo galo dalka.